ပြေးခြင်းကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတဲ့အခါ - Hello Sayarwon
ပြေးခြင်းကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတဲ့အခါ
အပြေးလေ့ကျင့်ခြင်းဟာ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။ ပြေးခြင်းဟာ စိုးရိမ်ပူပင်မှုတွေကို လျော့ကျစေပြီး စိတ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကိုလည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ အပြေးလေ့ကျင့်ခြင်းကို နေ့စဉ်ပုံမှန် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအဖြစ် အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်ပေမယ့် လိုတာထက်ပိုပြီး အားစိုက်မိမယ်ဆိုရင်တော့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရနိုင်ချေ အလွန်များသလို ပြန်ကောင်းလာဖို့ အချိန်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ယောက် အပြေးလေ့ကျင့်ရာကနေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့မယ်ဆိုရင် သူဟာ နာကျင်မှု၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် အားမလိုအားမရဖြစ်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ အနီးကပ် ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုကို အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ လူနာကို ဘယ်လိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရထားသူကို အနားပေးခြင်းဟာ ပထမဆုံးနဲ့ အရေးအကြီးဆုံး လုပ်ရမယ့် ကုသမှုဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူနာရဲ့ဒူးကို တတ်နိုင်သမျှ အနားပေးပါ။ အနာတရဖြစ်ထားတဲ့ နေရာများကို ဂရုတစိုက် ဖုံးအုပ်ကာကွယ်ထားပါ။ ဒူးအောက်မှာ ခေါင်းအုံးခပ်သေးသေးတစ်လုံး ထားပေးခြင်းက လူနာကို ပိုပြီးသက်သောင့်သက်သာ ရှိစေပါတယ်။ ဒဏ်ရာကို ဝန်ပိစေမယ့် လှုပ်ရှားမှုများ မပြုလုပ်မိအောင် သတိထားပါ။
ရေခဲကပ်ခြင်းက နာကျင်မှုနဲ့ ရောင်ရမ်းခြင်းတို့ကို သက်သာစေပါတယ်။ ရေခဲကို ပဝါ သို့မဟုတ် တဘက်နှင့်ထုပ်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတဲ့ နေရာများပေါ် တစ်ကြိမ်လျှင် နာရီဝက်နှုန်းဖြင့် နှစ်နာရီဲခြား၊ သုံးနာရီခြားတစ်ခါ ပုံမှန်ကပ်ပေးပါ။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိပြီး ပထမ ၄၈နာရီမှ ၇၂နာရီအထိ ဒါမှမဟုတ် အရောင်ကျသွားတဲ့အထိ ရေခဲကပ်ပေးပါ။ ရေနွေးဖြင့်ရေချိုးခြင်း၊ ရေနွေးစိမ်ခြင်း၊ ရေနွေးအိပ်ကပ်ခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း စတာတွေက ရောင်ရမ်းခြင်းကို ပိုမိုဆိုးရွားစေတဲ့အတွက် ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
ဒဏ်ရာရထားတဲ့နေရာပေါ် ဖိပေးခြင်းဟာ ရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကြပ်စည်းခြင်း၊ ပတ်တီးစည်းခြင်း၊ ဒူးစွပ်ကဲ့သို့ အစွပ်စွပ်ခြင်း စတာတွေဟာလည်း ခြေထောက်လှုပ်ရှားမှုကို ထိန်းချုပ်ပေးသလို နောက်ထပ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရအောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒဏ်ရာပေါ် ဖိပေးနိုင်တဲ့ ကိရိယာတွေကို ဆေးဆိုင်များမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒဏ်ရာကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကြပ်စည်းခြင်းဟာ လူနာကို နေရခက်စေတဲ့အပြင် သွေးလှည့်ပတ်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တယ် ဆိုတာကိုတော့ သတိပြုသင့်ပါတယ်။ လူနာ ညအိပ်ရာမဝင်ခင် စည်းထားသမျှကို ဖယ်ရှားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
လူနာအိပ်ချိန်၊ အနားယူချိန်တွေမှာ ဒဏ်ရာရထားတဲ့နေရာအောက် ခေါင်းအုံးများခုပေးပြီး ဒဏ်ရာကို နှလုံးတည်နေရာရဲ့ အထက်မှာရှိနေအောင် မြှောက်ထားပေးခြင်းအားဖြင့် ၎င်းနေရာမှာ စုနေတဲ့အရည်တွေကို ဒဏ်ရာနဲ့ဝေးရာသို့ စီးဆင်းစေပြီး ရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။
ဒဏ်ရာအခြေအနေကို ဆရာဝန်ထံ သွားရောက်စစ်ဆေးပါ
တခါတရံမှာ သင့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးက ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ အလွယ်တကူ မသိနိုင်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အသေးစားနဲ့ အလတ်စား ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေကို အိမ်မှာတင် ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ပေမယ့် အကြီးစားထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေ ရလာခဲ့ရင်တော့ ဆေးရုံဆေးခန်းမှာ ကုသမှုခံယူဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ထံ သွားရောက်ပြသသင့်တဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့
ပြင်းထန်သည့် နာကျင်မှုဝေဒနာနှင့် ရောင်ရမ်းခြင်း
ဒဏ်ရာရထားသည့်နေရာအပြင် အခြားနေရာများကပါ နာကျင်ခြင်း
ဒဏ်ရာကို အထိမခံလောက်အောင် နာကျင်ခြင်း
ဒဏ်ရာရထားသည့်နေရာတွင် ဆိုးဆိုးရွားရွား ရောင်ရမ်းခြင်း
ဒဏ်ရာရထားသည့် အစိတ်အပိုင်းကို လှုပ်ရှားရန် ခက်ခဲခြင်း
ဒဏ်ရာရထားသည့်နေရာတဝိုက် ထုံကျင်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း
နာကျင်မှုဝေဒနာ သက်သာလာတာနဲ့အမျှ ဒဏ်ရာရထားတဲ့နေရာက ကြွက်သားနဲ့ အဆစ်တွေကို အပြည့်အဝလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ထိ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆန့်ထုတ်လေ့ကျင့်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆန့်ထုတ်လေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်နေ့လျှင် အကြိမ်များစွာ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဒဏ်ရာသက်သာမှုကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေသလို ကြွက်သားနဲ့အဆစ်များ တောင့်တင်းမသွားအောင် ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လုံးလုံးလျားလျား အနားယူခြင်းဟာ အမြဲတစေ ကောင်းမွန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရရှိထားတဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေကနေ နလံထူဖို့ ပြေးခြင်းအစား အခြား စိတ်ချရတဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေက ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ရေကူးခြင်းတို့ဟာ သင့်တင့်မျှတတဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပါဝင်တဲ့အပြင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာနည်းပါးတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အပြေးလေ့ကျင့်မှုကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်လည်စတင်ပါ
အပြေးလေ့ကျင့်နေကျ လူတစ်ယောက်ဟာ အခြားကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်နေပေမယ့်လည်း ပြေးရာမှာ အဓိကအသုံးပြုရတဲ့ ကြွက်သားတွေကိုတော့ အရင်ကလောက် လေ့ကျင့်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒဏ်ရာသက်သာလာတဲ့အခါ အပြေးလေ့ကျင့်မှုကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်လည်စတင်ခြင်းအားဖြင့် နောက်တစ်ကြိမ် ဒဏ်ရာထပ်မရအောင် ကာကွယ်သင့်ပါတယ်။ မိမိပြေးနေကျ ခရီးအကွာအဝေးရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ကို စတင်လေ့ကျင့်ပြီး ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ်မှ လေးပတ်အတွင်း နဂိုခရီးအကွာအဝေးရောက်တဲ့အထိ တဖြည်းဖြည်း တိုးသွားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ပြေးတလှည့်၊ လမ်းလျှောက်တလှည့် လေ့ကျင့်ရင်း နောက်ပိုင်းမှာ ပြေးတဲ့အချိန်အတိုင်းအတာကို ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးသွားနိုင်ပါတယ်။
အပြေးလေ့ကျင့်နေကျ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒဏ်ရာကြောင့် အနားယူနေရတဲ့ အချိန်အတွင်း စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကို အလွယ်တကူ ခံရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ လူနာနဲ့ အနီးကပ်နေပြီး စိတ်ရှည်သည်းခံဖို့ အားပေးသင့်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာပြန်ကောင်းလာဖို့ အချိန်ယူရမယ်ဆိုတာကို လူနာသဘောပေါက်အောင် ရှင်းပြပါ။ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိသူဟာ ပိုပြီးလျင်လျင်မြန်မြန် နေကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။
အပြေးလေ့ကျင့်ခြင်းကြောင့် ရလာတဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေ လုံးဝသက်သာပျောက်ကင်းဖို့ လိုအပ်တဲ့အချိန်ပမာဏဟာ အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးအပေါ် မူတည်ပေမယ့် ဒီအခြေအနေမှာ စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး နည်းလမ်းရှာဖွေ ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် လူနာအတွက် အကျိုးရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူနာကို လိုတာထပ်ပိုပြီး အားမစိုက်မိဖို့ အမြဲအားပေးပါ။ အခုပြောခဲ့တဲ့ အကြံပြုချက်တွေအတိုင်း လူနာကို ဂရုတစိုက် ပြုစုပေးမယ်ဆိုရင် အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း ပြန်ကောင်းလာမှာ အသေအချာပါပဲ။
Knee Problems and Injuries – Home Treatment. http://www.webmd.com/pain-management/knee-pain/knee-problems-and-injuries-home-treatment. Accessed August 25, 2016.
7 Reasons Your Injury Is Not Getting Any Better. http://breakingmuscle.com/mobility-recovery/7-reasons-your-injury-is-not-getting-any-better. Accessed August 25, 2016
3. The Key to Overcoming Running Injuries. http://www.active.com/running/articles/the-key-to-overcoming-running-injuries. Accessed August 25, 2016.